Zaza Mpivarotra Fako ao Quetta Tsy Misy Mpiaro · Global Voices teny Malagasy
Zaza Mpivarotra Fako ao Quetta Tsy Misy Mpiaro
Voadika ny 08 Jona 2015 3:28 GMT
Ankizy Mpiasa Jummah sy Razzaq. Saripikan'i Sami Parvez
Ny lahatsoratra dia nosoratan'i Adnan Aamir ho an'ny The Balochistan Point. Nivoaka indray ato amin'ny Global Voices noho ny fifanarahana hifampizara vontoaty.
Isan'andro rehefa miposaka ny masoandro dia mandao ny fonenany i Jummah Khan sy i Razzaq, mitondra harona plastika lehibe mihantona amin'ny tendany, hitady fako. Ny hariva, mivarotra ny fako nangoniny izy ireo.
Tahaka ireo ankizy an'arivony ao an-drenivohitr'i Balochistan antsoina hoe Quetta, dia tsy maintsy miasa mbola zaza noho ny fahantrana lalina ilay 12 taona Jummah sy ilay 11 taona Razzaq.
Manakaiky ny ampahatelon'ny mponina ao Pakistan no miaina ao ambany tokonam-baravaran'ny fahantrana, ary ao Balochistan, faritany mahantra indrindra ao amin'ny firenena, dia ratsy indrindra ny toe-draharaha : Saika ny 52 isanjaton'ny mponina no miaina ao ambany tokonam-baravaran'ny fahantrana.
Tsy misy ny antontanisa ofisialin'ny zaza tsy maintsy miasa ao Quetta, saingy misy fikambanana tsy miankina sady tsy mitady tombom-barotra ara-bola Society for Empowering Human Resources (SEHER), [Fikambanana Manome Hasina ny Vitan'Olombelona] nanombana fa mihoatra ny 10000 ny zaza miasa ao amin'ny tanàna misy mponina 1,3 tapitrisa. Manombana ny SEHER fa ny 60%-n'ny ankizy no tafiditra amin'ny fitsiponana fako.
Tsy taratra ho manao ho laharam-pahamehana ny fampidinana ny tahan'ny ankizy miasa ny governemantan'i Balochistan. Ny zava-nisy, tamin'ny herintaona dia tsy lany tao amin'ny antenimieram-paritany ny Volavolan-Dalàna Mandrara ny Zaza ao Balochistan tsy Hiasa.
Ity volavolan-dalàna ity no tsy henjana indrindra amin'ny lalàna misoroka ny fampiasana zaza raha mitaha amin'ireo faritany telo hafa ao Pakistan. Tsy mba tahaka ireo lalàna hafa, fa ity iray ity dia mametraka ny ankizy ho 12 taona na midina, (ny an'ny hafa miaro ny zaza 14 taona noho midina) ary ity iray ity dia tsy misoroka ny fampiasana ankizy anelanelan'ny taona 14-18 ho any amin'ny toerana na asa mampidi-doza.
Raha mbola tsy nandany ny lalànany manokana ny faritany dia tokony ny lalàna federaly miaro ny ankizy, ahitana ny fanarahamason'ny inspekteran'ny fampiasana zaza miisa 34 no mihatra, saingy vitsy dia vitsy ny manaraka izany. Raha ny izy, dia mandidy ny ankizy rehetra hianatra maimaimpoana mandrapahatongan'ny faha-16 taonany ny lalànan'ny firenena, saingy ny 66%-n'ny zaza ao Balochistan no tsy mankany an-tsekoly.
Milaza i Jummah Khan fa mahazo anelanelan'ny $1,5 ka hatramin'ny $3 isan'andro eo ho eo izy amin'ny famarotana izay fako notsiponiny. “Miasa aho hanohanako ny fianakaviako satria tsy manan'asa ny raiko,” hoy i Jummah Khan. Manana rahalahy iray sy anabavy roa izy ary miasa daholo izy rehetra ireo.
“Rehefa tsy miasa izahay dia tsy manana na inona na inona hohanina ny fianakavianay,” hoy ny taraindrainan'i Jummah Khan. “Efa niasa aho hatramin'ny fahaefa-taonako ary tsy mbola mieritreritra ny hijanona amin'ny fitsiponana fako aho na dia atsy ho atsy aza,” hoy i Jummah izay hita miharihary eny amin'ny tavany ny fahadisoam-panantenana.
“Miasa aho satria tsy manan-dray,” hoy i Razzaq nanampy ampitoniana. Efa lasa taona vitsy lasa izay ny rainy. Nolaziny fa hatramin'izay nahatsiarovany saina dia efa niasa izy.
Tsy nety niteny tamiko izay vola raisiny i Razzaq. Milaza ny namany fa matahotra izy fandrao hisy hanendaka aminy indray izay efa azony.
Samy milaza ho tsy misy manambaka na manararaotra ny fahakelezany na i Jummah Khan na i Razzaq rehfea mitsipona fako. Na tsy misy tokoa ny manararaotra azy ireo na manafina ny fanararaotana azy izy ireo noho ny henatra, izay fahita ao Pakistan, dia tsy misy afa-manizingizina ny amin'izany.
Saingy tsy “tsara vintana” ny maro amin'ny zaza miasa.
Abdul Samad, dia mividy ny fako tsimponin'ny zaza mpiasa tahaka an'i Jummah sy Razzaq. Milaza i Samad fa tsy vitan'ny iharan'ny fanararaotana ireo zaza mpitsimpona fako ireo fa mbola ataon'ireo mpanelanelana ambany dia ambany ihany koa ny fako notsimponin'izy ireo.
“Tsy mba misy mpiahy ireo zaza mpiasa ireo ka izay no mahatonga azy ireo ho mora marefon'ny karazam-pihoaram-pahefana rehetra,” hoy i Samad. “Tsy afa-mizara ny tantaran'ireo fanararaotana manjò ireo zaza mpiasa aho fa tena rikoriko,” hoy ilay mpivarotra fako.
Nilaza i Samad fa ny ankamaroan'ireo ankizy mpiasa dia avy amin'ny foko Pakhtuns, na mpitsoa-ponenana Afghanna kamboty avy ao amin'ny faritany avaratra andrefan'i Pakistan antsoina hoe Khyber Pakhtunkhwa.